Izindaba - Umphumela wobukhulu besikhunta ekukhiqizeni amagilavu ​​e-latex
Umphumela wobuso besikhunta ekukhiqizeni amagilavu ​​e-latex
I-Novel coronavirus isakazeka ngokuya yanda emhlabeni jikelele, kube nokwanda kwesidingo semishini yokuvikela, ikakhulukazi amaski okuvikela kanye namagilavu ​​wemvelo we-latex. Njengenye yezindlela zokuzivikela ezibalulekile, amagilavu ​​wezokwelapha wemvelo anganikeza ukuphepha okuhle kakhulu nokuzihlukanisa nezingozi ezingadingekile.
Kodwa-ke, ekukhiqizeni amagilavu ​​wemvelo we-latex, kubalulekile ukuthola indlela esheshayo, esebenza kahle futhi engenazintambo yokukala ukuqina kobuso besikhunta segilavu ​​ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukukhiqizwa kungathuthukiswa futhi amandla wokukhiqiza anganwetshwa futhi ukuhlangabezana nezidingo yokukhula okuqhubekayo.
Ubukhali bendawo yesikhunta segilavu ​​kubaluleke kakhulu esigabeni sokukhiqizwa kwamagilavu ​​wemvelo we-latex, njengoba ubukhulu besikhunta segilavu ​​kubalulekile ekukhiqizeni amagilavu ​​uqobo. Ubungqimba bendawo bunquma ubukhulu beglavu eqediwe. Uma indawo ibushelelezi kakhulu, uketshezi lwe-latex yemvelo luzophuma ebusweni ngesikhathi sokubumba, lubangele igilavu ​​libe mncane kakhulu futhi lilahlekelwe umthelela walo wokuzivikela. Ngaphezu kwalokho, uma ubukhulu bendawo bungabushelelezi, inani elikhulu le-latex yemvelo lizoqoqa lihlale esikhunjeni sokubumba, okuholele kugilavu ​​elincane kakhulu ukusebenza kwengalo uqobo.
Imitha yokuqina kobuso inikeza ikhambi lokugcina lokukhiqizwa kwamagilavu ​​wemvelo we-latex, hhayi kuphela ngenxa yokusebenziseka kwawo okusebenzayo nokusebenza kahle, kepha futhi ngoba ivumela izilinganiso ukuthi zenziwe ngaphandle kwezingubo zomsebenzi ezingaguquguquki nezinganyakazi noma izinsimbi zomculo. I-instrumentation ingafakwa ngokushesha kuglavu elenza igilavu ​​yokukala, ngokuya ngoxhumano lwe-Bluetooth olungenantambo kumodyuli ye-Push nakwisigaba sokubonisa. Le ndlela yokulinganisa esheshayo nephumelelayo ihlangabezana nezidingo zamathrendi wanamuhla nawakusasa.
Ukusetshenziswa kwemitha yokuqina ephathekayo eqinile, esheshayo nethembekile kusiza izilinganiso zensimu ezisheshayo, ezilula nezinembile kuzo zonke izindawo zemvelo kanye nendawo, okwenza kube yisinqumo esingcono kakhulu ongasisebenzisa esiteji sokukhiqiza, ekukhiqizweni kwezimboni nasekamelweni lokuhlola.
Isikhathi Iposi: Jul-05-2021